3M & Saint Paul - Taariikhda 3M Saint Paul Xafiiska iyo Warshada | Saint Paul Historical
Taariikhda 3M Saint Paul Xafiiska iyo Warshada
3M waxay ku taalay Dhinaca Bari ee Saint Paul ugu badnaan 100 sanadood oo shirkadu waxay saldhig ku lahayd ilaa 1962. Markaas dhex safarto goobta xarunta taariikhiga ah ee 2M, waxaad la kulmi doontaa taxane fareemo sawiro ku muujinsanyihiin taas oo suxuusata shirkada iyo kuwa halkan ka shaqeeyay. Barnaamijka fasirada leh waxaa loo hurmariyay inay caawiso sheegida sheekadaas sidii qayb fududaynta ee duminta dhismaha taariikhiga ah ee xarunta.
Sheekada 3M waxaa lagu gubiyaa dhexda taxanaha fareemka saddex cabbir ah, iyaddoo ku salaysan waxay ka koobantahay. Fareenku waxa uu isu kala jiraa goobtan xaga Xarunta ilaa goobta waqooyiga ee Phalen Boulevard, taas oo ahayd meesha hawlagalada makaanikada ee3M.
Fareemada sawirku muujiyay waxay qaadayaan sawirka waxa warshada iyo xaruntu u eekayd, “waxa ka dhacay halkan, cida ka shaqaysay halkan, iyo iminka 3M oo ku habboon bulshadda balaadhan.” Fareemada sawirada mowduuca fasiraya waxaa lagu rakibay fareeemka sawirka dhagaxa kaas oo laga keenay dibada ku jeeda Dhismaha 42.
Fareemada sawirka wax fasiraya waxay muujinayaan mowduucyo iyo sheekooyin ku saabsan koboca iyo horumarka 3M, dadkeeda, iyo alaabta ay soo saarta ee ugu mujhiimsan ee Dhinaca Bidix ee Saint Paul.
Way Markers waxay qaadaa macluumaadka xooga la saarayo ee ku saabsan dadka iyo goobaha 3M iyo xidhiidhkooda bulshadda.
Xaqiiqooyinka goobtu waxay sharaxdaa xaqiiyooyinka xiisaha leh iyo dhacdooyinka la xidhiidha 3M iyo xarunta Saint Paul.
Xarunta 3M Saint Paul Xarunta: Waxyar ayaa ka hadhsan xarunta 3M ee Saint Paul laga bilaabo 1958. Jidka Mendota, kaas oo ay ka mid tahay goobta Xarunta maanta, mar waxay ahayd jid aad u mashquul badan oo u kaca dhanka xarunta laga bilaabo isgoyska Minnehaha Avenue iyo East Seventh Street. Goobta Xarunta waxaa lagu daray khariidadan.
Bruce Vento Dhabooyinka Goboleed: khariidada lagu helay xishmadda Goobaha lagu nasto iyo Raaxada ee Saint Paul. ~ Source: Saint Paul Parks and Recreation
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “3M & Saint Paul,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/396.